Ogaden Press Agency(OPA) News headlines from Ogaden,Ethiopia,Somalia,All Regions of Horn of Africa and the world. OYSU oo Idin leh: Ciid Wanaagsan.
Posted by Ogadentoday-Chief Editor on August 18 2012 09:34:26
(Ogadentoday Press)- Walaalayaal waxaanu soo gudanay waajibaadkii Alle uu na dulyeelay bisha barakaysan ee Ramadan.waxaan Allaha wayn kabaryaynaa in dhamaanteen uu naga aqbalo soonkii, salaadii, cibaadooyinkii suubanaa iyo ducooyinkii aanu lanimid bishaas barakaysan ee Ramadan.Ciiddu waa astaan weyn oo ka mid ah astaamaha ummadi leedahay. Ummad waliba waxay leedahay maalmo ay weyneyso, faraxdo, soona bandhigto kaabayaasha jiritaankeeda. Ummadda Islaamka waxaa iyada intaas u dheer in ay maalitaas Rabbigeed u mahad celiso, weyneyso isla markaana muujiso addoonnimadeeda. Walaalayaal waxaanu ogsoonahay xaaladda gurracan ee uu manta shacabkayagu iyo dalkuba ku suganyahay. Anaga oo la qaybsanayna farxadda iyo damaashaadka Ciidul Fidriga walaalaha islaamka ah ayaanaan marna ilaawi karin dhibaatada ba�an ee gumaysigu baday shacabka iyo dalka Ogadenya.